Apple Watch inoregererwa kubhadhara mitero | Ndinobva mac
Mutungamiri weUS, VaDonald Trump vakatemera mitero yezvehupfumi pazvinhu zvese zvakabva kuChina. Iyo Apple Watch haina kuvabvisa, pakutanga. Ichokwadi kuti ipapo vakadzikiswa kusvika ku50% uye zvino nhau dzakanaka, zvirinani kune Apple, ndedzekuti dzinotakurika yakasunungurwa zvachose yemitengo yambotaurwa.
Mushure mekukumbira kwaApple, iyo Apple Watch haibvisirwe Mutero
Gore rakapera Mutungamiri weUnited States akagadza mitero pazvinhu zvese kubva kuChina. Chaizvoizvo 15% mutero. Apple Watch haina kuregererwa, zvisinei yakadzikiswa pamwedzi wapfuura nekuda kwechibvumirano chekutanga chekutengeserana pakati peUnited States neChina. Izvozvi uye mushure mekukumbira kubva kuApple, Apple Watch haina kubviswa pamubhadharo uyu wemutero.
Apple yakatungamira chikumbiro ichi kuUnited States Trade Representative ichipa zano kuti Apple Watch «isina kukosha kwakakosha uye haina hukama ne 'Yakagadzirwa muChina 2025' kana mamwe maindasitiri eChina zvirongwa. ' Apple yakatiwo haisati yawana sosi kunze kweChina iyo inogona kusangana neUS kudiwa kweApple Watch.
Ichi chikumbiro chakabvumidzwa uye kubva zvino Apple haifanire kubhadhara yekugadzira ichi chigadzirwa muChina. Panguva ino ihondo yakakundirwa kambani yeAmerica, nekuti yakazviwana muApple Watch uye mu sarudza zvikamu zveMac Pro.
Pachine kuramba uchirwa Nekuti Hurumende yeUS inotarisa zvimwe zvigadzirwa zvakakumbirwa nenzira imwechete, senge iPhone, AirPods nevamwe.
Mwedzi yakawanda yekutambudzika inobhadhara. Isu tichiri kurangarira zvakataurwa naTim Cook maakataura kuna Donald Trump izvo uyu mutero waizodzivirira kukwikwidzana neSamsung kubva kwauri kusvika iwe mukurwa kwetekinoroji kune ese makambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inoregererwa kubhadhara mitero